Sokajy "fanampiny" (tohiny)
Ny bateria NiMH dia karazany iray amin’ireo fivoarana takian’ireo fitaovana elektrônika izay miha-avo lenta sy manana habe tsara aika (*) ary maivana azo enti-manaraka ny tena ka mitaky angovonaratra maharitra sy mateza.
Natobaka teo amin’ny tsena tany amin’ny taona 1988 ny NiMH ary nitondra fivoarana sy fanatsarana teo amin’ny karazan’ny bateria sokajy “fanampiny”, na teo amin’ny tanjaka izany, na ny vidiny na ny fiantraikany teo amin’ny tontolo manodidina ihany koa.
Noho ny bateria NiMH manana tahiry fahana avo roa heny sy mitovy rianaratra amin’ny bateria NiCd, sy noho izy efa taka-bidy, ary noho izy tsy mandoto ny tontolo manodidina noho ilay vita amin'ny kadmiôma, dia lasa safidy ekônômika misolo ny NiCd.
Nikela Metaly Hibrida (NiMH)
Ny bateria NiMH dia azo lazaina fa NiCd nohatsaraina satria betsaka ny lafitsara nolovaina tamin’ny NiCd.
Notazonina ilay elektrôda miabo vita amin’ny hidrôksidana nikela izay teknika efa voafehy sy manana lafitsara maro ary azo atao be velarana sy ahafahana mampitombo ny tahiry fahana.
Nosoloina entona hidrôzena kosa ilay kadmiôma amin’ny elektrôda miiba ka raha hidrôzena no tena singa miasa amin’ny elektrôda miiba, ny iôna hidrôzena (prôtôna) kosa dia “voatahiry” ao anatin’ny rafitra metaly hibrida fototr’ilay elektrôda.
Ny ambiny dia mitovy amin’ny NiCd toy ny elektrôlita izay mampiasa hidrôksidana pôtasiôma. Plastika manify feno hirika madinika hivezivezen’ny iôna no mpanasaraka ny elektrôda roa. Ireo rehetra ireo dia voarindra anaty fono mahatanty tsindry avo sy misy valva fiarovana raha mafy loatra ny tsindry vokatry ny entona miforona.
Ny mampiavaka ilay metaly mifangaro (hibrida) nanaovana ny elektrôda miiba dia izy afaka mitroka hidrôzena mihoatra arivo heny noho ny habeny, ary afaka mamoaka izany hidrôzena izany ihany koa amin’ny fiotana. Ilay metaly A dia mamoaka hafanana (eksôtermika) ary ilay metaly B kosa dia mitroka hafanana (endôtermika). Ny fangaron’izy roa no hahazoana mitroka sy mamoaka hidrôzena amin’ny hafanana sy tsindry antoniny.
Ny metaly mifangaro dia nosokajiana araka ny fomba nangaroana azy: AB (TiFe, sns.), AB2 (ZnMn2, sns.), AB5 (LaNi5, sns.), A2B (Mg2Ni, sns.). Ny sokajy AB5 sy ny AB2 no manana toetra ilaina sy mety amin’ny elektrôda miiba, ary betsaka ny mpamboatra bateria no manao ilay metaly A amin’ny fangaro avy ami’ny metaly sokajin’ny “tany mahalana“ (Rare Earth Element – REE)
Raha oharina amin’ny NiCd mitovy habe dia manana tahiry fahana hatramin’ny 40% - 100% avo kokoa ny NiMH. Ny olana eo amin’ny NiMH dia ilay elektrôda metaly-hibrida mora voakikin’ny fiota eletrô-simika eo amin’ny fifandimbiasan’ny fahana sy ny fandaniam-pahana. Ny karazan’io fangarona metaly io no isan’ny mahatonga ny karazana bateria NiMH ho samihafa teza sy vidy.
Famahanana sy Fandaniam-pahana
Ny fiota amin’ny famahanana sy ny fandaniam-pahana dia voafaritra toy izao:
Raha azo ampiasaina amin’ny bateria NiMH ny fomba teknika fototra famahanana ny NiCd dia misy antsipiriany mila tandremana sy fahamailoana kosa rehefa mamahana NiMH noho izy sarotiny amin’ny “fahana mihoatra”. Mba ho marina tsara ny fahana, ny mpamahana matetika dia mampiasa teknika fanampiny na mampiaraka ireo teknika famahanana (faharetana voaaraka, delta hafanana, ary miiba delta volt) ka izay teknika milaza mialoha fa feno ny fahana dia tsaraina sy hamafisin’ny teknika hafa.
Be laro noho ny NiCd ny famahanana NiMH araka izany ary mila fahana marina sy antoniny: ny fahana tsy ampy dia mampihena ny tanjany ary ny fahana mihoatra dia mampihena ny fahatezany
Azo fintinina toy izao ny fatran'ireo hazaka amin'ny famahanana NiMH fampiasa matetika:
Sandam-pahana (haingana): 0.5 – 1.0CmA
Faharetan’ny fahana (haingana): 1-3 ora
Sandam-pahana (miadana): 0.1CmA - 0.2CmA
Faharetan’ny fahana (miadana): 10-15 ora
Sandan’ny fahana mitsitapitapy: latsaky ny 0.025CmA
Fatran’ny fahana: 100-110%
ΔT = 1°C isa-minitra; mari-pàna farany ambony: 50° (AAA) - 55° (A, AA, D)
Rianaratra rehefa feno fahana: 1.8V
–ΔV = 5mV raha betsaka
Manome rianaratra 1.2V mandritra ny fandaniam-pahana ary mahazaka fandaniam-pahana avo ihany koa ny bateria NiMH (hatrany amin’ny 2.0CmA na 3.0CmA) ka mety tsara amin’ny fitaovana mila herinaratra matanjaka. Ny fandaniam-pahana rehefa tsy miasa kosa dia haingana satria latsaky ny 50% sisa ny fahana aorian’ny 6 volana. Mbola azo fahanana feno anefa raha mbola tsy latsaky ny 1.0V ny rianaratra omeny. Raha latsaky ny 1.0V ny singa iray ao anatin’ny bateria mitandahatra dia mety hiteraka ny tranga “fandaniam-pahana mihoatra” mampifamadika ny fahan'aratry ny tendrony.
Tsy dia azo tehirizina ela loatra ny bateria NiMH satria 24 ora aorian’ny famahanana dia efa mihena hatrany amin'ny 20% ny fahana na tsy miasa aza ary mihena hatrany amin’ny 10% isam-bolana avy eo. Io hafainganan’ny fandaniam-pahana io dia miankina amin’ny karazan’ilay metaly-hibrida ao anatiny. Mety misy maharitra 5 avo heny noho ny hafa kanefa dia kely tahiry fahana noho ny hafa ihany koa.
Fampiasa amin’ny fitaovana mila herinaratra matanjaka ny NiMH ary saika misolo ny NiCd amin’ny fitaovana elektronika enti-manaraka ny tena, kilalao video, radio talkie-walkies, fitaovana elektrika madinika ao an-tokantrano toy ny milina mpitroka vovoka.
Araka ny toetran’ny NiMH, ny bateria vaovao dia efa nihena fahana ary mila fahanana ho feno alohan’ny ampiasana azy voalohany. Izany no amahanana ny finday na laptôpy na fitaovana hafa ho feno alohan’ny amelomana azy voalohany;
Raha bateria NiMH mitovy habe, mateza kokoa ny bateria kely tahiry fahana noho ireo avo tahiry fahana. Ohatra ny bateria 1000mAh dia mateza kokoa noho ny bateria 2700mAh.
“Maranitra” lavitra ny mpamahana NiMH raha mitaha amin’ny mpamahana NiCd ary ahazoana manome fahana marina. Azo amahanana bateria NiCd tsara araka izany ny mpamahana NiMH. TSY AZO fahanana amin’ny mpamahana NiCd kosa ny bateria NiMH fa dia ho simba vetivety sy mety hampidi-doza ho an’ny mpampiasa;
Azo kajiana tsotsotra toy izao ny faharetan’ny famahanana NiMH:
Faharetan’ny famahanana = tahiry fahan'ny bateria (mAh) x 120% ÷ vaikanaratra mpamahana (mA)
Ohatra, ny famahanana batería 2450mAh (bika AA) amin’ny vaikanaratra 196mA ( 0.08CmA) dia maharitra 15 ora.
Raha mafana loatra ny bateria NiMH avy nofahanana, dia mafana lavitra ny ao anatiny ka tokony avela hangatsiaka aloha vao ampiasaina;
Tsy tsara ny mampiasa miaraka bateria tsy mitovy tahiry fahana fa mampihena ny fahatezan'ilay kely tahiry fahana izany;
toetran'ny zavatra tsara tery, mifanety tsara (Rajemisa-Raolison, 2013, p.37)
izay rehetra aharo amin'ny zavatra iray mba hampitombo ny heriny (Rajemisa-Raolison, 2013, p.533)
Mahazaka sandam-pahana avo ny bateria NiMH ary fahana haingana no mety kokoa.
Misy ihany mpamahana mampiasa sandam-pahana malefaka ahazoana manao fahana haingana, ary ahazoana mamahana NiCd ihany koa.
Tsy mahatanty fahana mihoatra ny NiMH ary ny sandam-pahana mitsitapitapy dia atao malefaka noho ny an’ny NiCd.
Toy ny NiCd dia mihafaingana ny fiakaran’ny mari-pana rehefa akaiky ny fetran’ny fahana feno ka raha tsy voaaraka dia miteraka entona mampiakatra ny tsindry ao anatin’ilay bateria. Efa misy valva fiarovana ihany mamoaka ny entona rehefa mafy loatra ny tsindry saingy rehefa misokatra iny valva iny dia tsy hateza intsony izay ilay bateria.
Mety mitranga eo amin’ny fampiasana singana batería mitandahatra ity olana ity ary mampifamadika ny tendro miiba sy miabon’ilay singa. Tsy mitovy tanteraka ny tahiry fahan’ny singa tsirairay na dia mitovy marika sy karazana aza. Izay kely tahiry fahana rehefa ampiasaina mitandahatra dia tafidina ambanin’ny tokonana faharitràna alohan’ny hafa ary raha mbola mitohy ny fandaniam-pahana dia mitarika fiota mampifamadika ny fahan’aratra eo amin’ny elektrôda roa. Miteraka entona hidrôzena sy mampitombo ny tsindry ao anatin’ilay bateria koa izany ary manokatra ilay valva fiarovana. Manimba tanterka ny batería ity tranga ity.
Ny fitaovana avo lenta toy ny fakan-tsary na finday dia manana rafitra elektronika mitily io tranga io, fa ny fitaovana hafa toy ny kilalao sy ny jiro fanao am-paosy kosa tsy manana.
Tsy atahorana kosa anefa io tranga io amin’ny singa mirazotra ao anaty bateria.
Ariky ny bateria
Ny mpamboatra bateria dia milaza fa tsy mbola voaporofo fa manana arika toy ny NiCd ny NiMH, fa raha misy fihenan’ny tahiry fahana na tsy fahafenoan’ny fahana dia zavatra hafa ny antony fa tsy ny olan’ny arika velively.
Mpamahana mifototra amin'ny "miiba delta vôlta"
Famahana NiMH manana tahiry fahana 2100mAh (bika AA) amin'ny sandam-pahana 0.67CmA mandritra ny 2 ora (famahanana NiCd mahatanty fahana haingana koa)
Pejy teo aloha: Bateria NiCd << | >> Pejy manaraka: Bateria Li-ion